Ao anatin’ny krizin’i Kashmir (FITANTARANA MANOKANA TAONA 2020) · Global Voices teny Malagasy
Ao anatin'ny krizin'i Kashmir (FITANTARANA MANOKANA TAONA 2020)
Voadika ny 07 Mey 2022 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Ελληνικά, русский, ਪੰਜਾਬੀ, Italiano, English
Miaramila mpiambina Indiana mijoro efa vonona ao Srinagar taorian'ny nametrahana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina any amin'ny faritra sasany amin'ny lohasaha Kashmir. Sary nivoaka tamin'ny 25 Mey 2019. Tao amin'ny kaontin’i Ieshan Wani Instagram. Nampiasaina nahazoana alalana.
Ny 5 Aogositra 2019, nanafoana ny Andininy faha-370 ao amin'ny lalàm-panorenan'i India izay nanome sata fizakan-tena manokana nanomboka tamin'ny taona 1950 ho an'ny fanjakana ifandirana Jammu sy Kashmir, any amin'ny zoro avaratrandrefan'ny firenena, ny governemantan'i India, tarihin'ny Antoko Bharatiya Janata (BJP).
Vondrom-paritra misaraka ankehitriny i Jammu, Kashmir, ary Ladakh. Noho ny tahotra korontana, nametraka mpitarika politika an-jatony sy ny mpanampy azy ireo ho eo ambany fanaraha-maso ny trano fonenan’izy ireo ny manampahefana, ary nampiato ny fidirana amin'ny tambajotra finday, an-tariby, ary aterineto. Nasiana fanakanan-dalana teny an-dalambe ary saika ny famerana ny fivezivezena rehetra no ampiharina.
Tamin'ny 5 Aogositra 2019, nihidy tanteraka i Srinagar, tanàna lehibe ao Jammu sy Kashmir, ary olona miisa 2300 farafahakeliny, ny ankamaroany tovolahy, no voatazona.
Vakio bebe kokoa: Indian government abolishes Kashmir's special status, announces bifurcation
Tamin'ny fahatapahan'ny fifandraisana, nitodika tany amin'ny Twitter ny mpisera — izay nanosika ny governemanta Indiana hangataka ny fampiatoana ny kaonty sasany nampangainy ho nanaparitaka “vaovao tsy marina”.
Vakio bebe kokoa: Miangavy ny Twitter ny governemanta Indiana mba hanala an'ireo tatitra “manely tsaho” mikasika an'i Kashmir
Na dia nanaisotra tsikelikely ny fameperana aza ny manampahefana dia nijanona lavitra ny sekoly tamin'ireo andro voalohany ny mpianatra. Nandidy ireo toeram-pampianarana hisokatra indray ny 28 aogositra ny manampahefana. Mandritra izany fotoana izany, naverina tsikelikely ny fifandraisana any amin'ny toerana sasany.
Fefy vy eo anoloan'ny tranoben'ny governemanta sy ny tetezana. Sary avy amin'i Fatima Jahan. Nahazoana alalana.
Mitsikera ny “fibodoana” an'i Kashmir ny tatitra navoakan'ireo mpikatroka Indiana vao haingana na dia nanizingizina aza ny governemanta Indiana fa miverina tsikelikely amin'ny laoniny ny faritra, ary mandrisika ny governemanta “hamerina ny demaokrasia ao amin'ny faritra” izy ireo.
Vakio bebe kokoa: Indian-administered Kashmir is like an ‘open prison’, says observers
Samy milaza ny faritany Kashmir ifandirana azy manontolo na i India sy Pakistan. Raha i India no mifehy ny ampahany ilany, izay antsoiny hoe Jammu sy Kashmir, Pakistan kosa no mifehy ny ampahany iray hafa nomena anarana hoe Azad Kashmir. Ankoatra izany, i Shina no mitantana an’i Aksai Chin, ampahany kely amin'ny faritr'i Ladakh izay lazain'i India ho anisan'i Kashmir.
Manana mponina Miozolomana betsaka i Jammu sy Kashmir. Nanomboka tamin'ny taona 1989, ao anatin'ny fikomiana ny faritra ary niaina fihetsiketsehana tsy tambo isaina, ny sasany mitaky ny fahaleovan-tena na Azadi. Tao anatin'ny 27 taona, Kashmiri maherin'ny 70.000 no novonoina ary maro hafa no naratra na nosamborina tamin'ny famoretana nataon'ny miaramila Indiana.
Vakio ny fitantaranay manokana: The Kashmiri People Versus the Indian State
Vehivavy Kashmiri mpanao fihetsiketsehana sahy mamaly polisy iray nanakana azy tsy handroso mandritra ny famerana napetraka tao Srinagar, ny renivohitra fahavaratr'i Kashmir fehezin'ny Indiana. Sary avy amin'i Ieshan Wani, nahazoana alalana.
Hetsi-panoherana mahery vaika tao Pakistan
An'arivony ny Pakistaney naneho hevitra tamin’ny fomba mahery vaika tamin'ny fihetsiketsehana manerana ny firenena noho ny fanafoanana ny andininy faha-370. Naneho ny tsy fankasitrahany ny fihetsik'i India ny governemanta Pakistaney ary namaly haingana tamin'ny andiana hetsika hanehoana fanohanana an'ireo Kashmiris
Ohatra, noroahan’ny manampahefana ny Tompon’andraikitra Ambony Indiana any Pakistan Ajay Bisaria, nampiato ny fidirana amin'ny varotra sy ny habakabaka, ary nampihena ny fifandraisana amin'ny mpifanolobodirindrina aminy. Nilaza ihany koa i Pakistan fa tsy handefa tompon’andraikitra ambony amin'ny toerany any New Delhi izy ireo.
Namoaka taratasy ihany koa ny Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) tamin'ny 14 aogositra 2019 manambara fandrarana ny doka ahitana mpanakanto Indiana, na novokarina tany India ho anisan'ny politika vaovaon'ny firenena manoloana ny mpifanolo-bodirindrina aminy.
Vakio bebe kokoa: Pakistan's government suspends relations with India in show of solidarity with Kashmiris
Mihidy ny fivarotana. Sarin'i Fatima Jahan. Nahazoana alàlana.
Vakio bebe kokoa ireto tantara manaraka ireto eo am-panohizanay ny fanavaozana ity pejy ity:
* Fomba fijerin'ny Kashmirita iray manokana teraka tany Nepal ny krizy any Kashmir (23 Novambra 2019)
* Nanala ny ampahany tamin'ny fanapahana ny fifandraisana ao Kashmir i India, mbola tapaka kosa ny aterineto (16 Oktobra 2019)
* Video: Video: Roa volana fikatonana ao Kashmir (5 Oktobra 2019)